Mar dambe suurtagal maahan in hoos loo dhigo iOS 14.6 | Wararka IPhone
Isticmaalayaal badan, oo aan ku jiro naftayda, macruufka 14.6 wuxuu ahaa madax xanuun dhab ah oo ku saabsan faylka nolosha batteriga. Iyada oo la adeegsanayo macruufka 14.6.1 iyo macruufka 14.7 dhibaatada waa la xaliyay, si kastaba ha ahaatee marka la eego nooca cusub ee macruufka 14.7.1, mar labaad ayaan ku socdaa isla dhibaatadii.
Ka tagista dhibaatada waxqabadka batteriga (cabasho, waxba ma xallin doono), waa inaan ka hadalnaa macruufka 14.6, oo ah nooca la sii daayay macruufka 14.7.1, wuxuu joogsaday inuu ka helo server -yada Apple, taas oo ah in la yiraahdo, in haddii aadan ilaa hadda cusboonaysiin, mar dambe fursad uma lihid inaad sidaas samayso.
Geedi socodka lagu joojinayo saxiixa noocyadii hore ee macruufka ayaa ah mid caadi ah, maadaama Apple ay doonayso in dhammaan macaamiisheeda ay mar walba adeegsadaan nooca ugu dambeeya ee macruufka si ay laga ilaaliyo baylahda la dhajiyay qaababka cusub ee suuqa laga bilaabay.
Marka laga reebo marar dhif ah, Apple caadi ahaan 2 toddobaad gudahood Kahor intaadan joojin saxiixa noocyadii hore, in ka badan waqti macquul ah sidaa darteed haddii ay dhacdo in la ogaado dhibaatada nooca cusub, adeegsadayaashu waxay ku laaban karaan qaybtii hore iyagoon tagin Dukaanka Apple.
Markii la sii daayay macruufka 14.7.1 toddobaadkan, waxaan ku dhawaad ​​xaqiijin karnaa taas Wareegga nolosha ee macruufka 14 ayaa dhammaanaya, maadaama tani ay noqon doonto cusboonaysiintaadii ugu dambaysay, cusboonaysiin xallisay tiro badan oo cayayaan ah oo la ogaaday toddobaadyadii la soo dhaafay.
Warbaahinta qaar ayaa soo jeedinaysa in ay qaraabo ahaayeen Barnaamijka Pegasus ee shirkadda Israel ee NSO loo basaaso nooc kasta oo dad ah, iyada oo aan lagu rakibin wax barnaamij ah qalabkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » Mar dambe suurtagal maahan in hoos loo dhigo iOS 14.6
Khariidadaha Google ayaa durbadiiba siiya aaladda widget -ka macruufka shaashadda guriga